Waxay ogaadaan hab lagu tirtiro koontada 'iCloud' oo aan lahayn lambarka sirta ah | Wararka IPhone
Ignacio Sala | | iCloud, Amniga IPhone
Waxaan markii ugu horreysay maqalnay iCloud sanadkii 2011. Tan iyo markaas sanad walba Apple waxay kudareysey howlo cusub si ay uga dhigto ikhtiyaar muhiim u ah dhammaan adeegsadayaasha wax soo saarka Apple, ha ahaato aaladda moobaylka ama kombiyuutarrada. Waxay ahayd Steve Jobs kii, bilo ka hor dhimashadiisii, soo bandhigay iCloud oo gacan ka geysan doona macruufka 5 wuxuuna noo oggolaaday inaan ku helno macluumaad isku mid ah dhammaan aaladaha Apple, sida xiriirada, kalandarka, dukumiintiyada ku jira daruuraha, iyo Mail.
Erayadii Steve Jobs markuu ku soo bandhigayay iCloud shirkii Horumarinta ee 2011:
Maanta waa dhibaato dhab ah oo aad looga xumaado in macluumaadkaaga iyo waxyaabaha aad ka kooban tahay oo dhan laga dhigo kuwo cusbooneysiiya dhammaan qalabkaaga. iCloud waxay ku haysaa macluumaadkaaga muhiimka ah iyo waxyaabaha ku jira ilaa taariikhda aaladahaaga oo dhan. Waxaas oo dhami waxay u dhacaan si otomaatig ah oo aan lahayn fiilooyin, tan iyo markii lagu dhex daray codsiyadayada xitaa uma baahnid inaad ka fikirto, way shaqaysaa.
1 Waa maxay Qufulka Waxqabadka?
2 Waxaan illaaway furaheyga sirta ah ee iCloud, maxaan sameyn karaa?
3 Sidee looga fogaadaa inaad iibsato qalab uu qufulay iCloud?
4 Sida loo demiyo qufulka iCloud ee iPhone, iPad, iyo iPod taabashada
5 Sida loo furo iPhone-ka uu iCloud ku xiro macruufka 7
6 Sida loo furo iPhone-ka uu iCloud ku xiro macruufka 8
7 Sida loo furo iPhone-ka uu iCloud ku xiro macruufka 9 / iOS 10 / iOS 11
8 Qufulka iCloud malaga saari karaa JAILBILA?
Waa maxay Qufulka Waxqabadka?
Imaatinka macruufka 7, Apple wuxuu balaariyay shaqeynta iCloud adoo kudaray ikhtiyaar noo ogolaaday inaan qufulno iPhonekeena hadii lumis ama xatooyo dhacdo. Apple ayaa lagu qasbay hirgeli shaqadan si loo hagaajiyo amniga isticmaalaha, laakiin sidoo kale in la isku dayo in la yareeyo xatooyada qalabkan, oo kordhay sannadihii ugu dambeeyay qiimaha qaaliga ah ee ay haysteen awgeedna ka dhigtay mid ka mid ah aaladaha loogu baahan yahay suuqa madow.
Waad ku mahadsan tahay qufulka firfircoonida ee ku jira macruufka 7, haddii aaladda la xado ama aan lumino, waxaan ka xannibi karnaa marinka terminalka marka lagu daro raadinta waqti kasta oo ay tahay, ku habboon goorta aan luminay ama ilawnay. Laga soo bilaabo bogga internetka ee 'iCloud' waxaan si dhakhso leh uga heli karnaa aaladda, u soo bandhigi karnaa farriinta shaashadda si haddii Samaariya Wanaagsan uu u helo, noo soo celi, xannibna, samee dhawaaq ama soo saar mashiinka oo dhan meel fog. Marka qalabka la xiro, waa wax aan macquul aheyn in la isticmaalo haddii aanan haysan lambarka sirta ah ee koontada iCloud ee uu ku xiran yahay terminal, sidan ayaa loo xadaa iPhone, iPad ama iPod taabashada waa hawl aan waxtar lahayn maadaama oo ay u beddelayso terminal-ka warqad miisaankeedu qaali yahay.
Ahaanshaha iOS 7 nooca ugu horreeya ee shaqadan lagu heli karo, qufulka hawlgelinta lahaa cayayaanka ah oo loo oggol yahay in barkinta ka heli my function iPhone, si adeegsade kasta oo helay ama u soo helay iPhone leh iOS 7.1 uu ku furi karo xarunta iyada oo aan la gelin lambarka sirta ah ee koontada iCloud ee ay la xiriirtay. Ragga ka socda Cupertino waxay qaateen waqti aad u yar si ay u xalliyaan cilladdan amniga ee muhiimka ah iminkana sida kaliya ee lagu furi karo iPhone lagu xiray iCloud ma jiraan, ugu yaraan aragti ahaan, maxaa yeelay haddii aan internetka ka raadinno waxaan ka heli karnaa habab sheeganaya in aan awoodno samee sidaas, hababka aan hoos ku sharxo.
Waxaan illaaway furaheyga sirta ah ee iCloud, maxaan sameyn karaa?
Iska iloobida erayga sirta ah ee koontadeena iCloud oo aan ku leenahay dhammaan boosteejooyinkeenna la xiriira ma ahan waxa ugu xun ee aan dhici karin, tan iyo Apple waxay na siisaa waxyaabo kale oo sax ah si aan dib ugu soo ceshano mar kale. Haddii aynaan xasuusanin furaha koontadeena, wax caam ka noqon kara isticmaalka Aqoonsiga Taabashada oo naga hor istaagaya inta badan kiisaska soo galista erayga sirta ah, waa inaan socod ku tagnaa bogga https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid, waa bog ay Apple u diyaarsato dhammaan adeegsadayaasheeda si ay u beddelaan lambarka sirta ah ee koontadooda iCloud.
Sida loo abuuro erey sir ah oo gaar ah iCloud
Dhibaatadu waxay timaaddaa markaan xasuusanno jawaabaha su'aalaha muhiimka ah ee aan weydiinnay markii aan la saxiixannay shirkadda Apple. Maskaxda ku hay taas Apple waa inay hubisaa 100% inaan nahay isticmaale sharci ah koontadaas markaa had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad kudariso su'aalo aan xasuusan karno oo aan kujiro kuwa ay naqaano.
Xaaladahan oo kale waa nalagu qasbay maciin bido mid ka mid ah hababka kale in aan ka heli karno khadka tooska ah haddii aan dooneyno in taleefannadayada iPhone-ka, iPad-ka ama iPod taabashada ay noqdaan miisaan culus, maxaa yeelay Apple wax xal ah nama siineyso arrintan, maaddaama aysan dhibkeenna ahayn oo aanan xasuusan karin jawaabaha furaha su'aalaha aan dhidibada u taagnay waqtiga bixitaanka.
Sidee looga fogaadaa inaad iibsato qalab uu qufulay iCloud?
Marka aan iibsaneyno aaladda gacanta labaad, waa inaan tixgelinno arrimo kala duwan oo naga caawin kara inaan ogaanno in aaladda la xaday iyo in kale. Marka hore, waa inaad ogaataa Haddii iibinta qalabka ay ku jiraan sanduuqa iyo xeedho, Maaddaama dhagaha la galiyo sababo nadaafadeed awgood aan inta badan lala xiriirin macaamil ganacsi. Terminal kasta oo la iibiyo haddii sanduuqiisa iyo xeedho (ay jiraan xayeysiisyo badan oo sidan oo kale ah) waa inay gabi ahaanba ku kalsoonaan waayaan iyaga.
Marka labaad, haddii terminal-ka lagu wada iibiyo sanduuqa asalka ah iyo xeedho (muhiim) waa inaan hel lambarka IMEI ama nambarka taxanaha ah ee qalabka kuna soo bandhigo Bogga Apple ee noo ogolaanaya inaan hubino xaalada qufulka firfircoonida. Boggan ayaa noo sheegi doona haddii terminaalku la xiriiro akoon ama haddii, liddi ku ah, horay looga sii daayay balooggan oo ay isticmaali karaan qof kasta oo kale oo wata aqoonsigaaga Apple.
Sida loo demiyo qufulka iCloud ee iPhone, iPad, iyo iPod taabashada
Tan iyo imaatinka macruufka 7 mar kasta oo aan galno Aqoonsigeenna Apple-ka ee ku yaal boosteejada shaqada Raadi My iPhone si toos ah ayuu u shaqeeyaa, shaqeyn noo ogolaaneysa inaan ka xirno qalabka meel fog. Intaas waxaa sii dheer, terminaalku wuxuu weli laxiriirayaa Aqoonsigeena, sidaa darteed, haddii aan weyno ama nala xado, kaliya waxaan awood u yeelan doonnaa inaan furno oo aan sii wadno adeegsiga. Sidaa awgeed, marna laguguma talin inaad joojiso shaqadan. Si loo furo Raadi iPhone-kayga waa inaan raacnaa talaabooyinka soo socda:
Waan kor u kacaynaa goobaha.
Gudaha gudaheeda waxaan tagnaa iCloud.
Gudaha iCloud waxaan ka helaynaa ikhtiyaarka Soo hel iPhone / iPad / iPod taabto iyadoo kuxiran terminalka aan isticmaalno.
Daaqada xigta waxaan u siibi karnaa badhanka si aan u shaqeyno. Waqtigaas waa inaan galnaa lambarkayaga sirta ah si aan u xaqiijino inaan nahay isticmaaleyaasha sharciga ah ee xarunta.
Sida loo furo iPhone-ka uu iCloud ku xiro macruufka 7
IOS 7 waxay ahayd imaatinka Raadinta iPhone-kayga oo ay kujirto qufulka firfircoonida, quful kuu ogolaanaya inaad furto shaqadan adigoon galin lambarka sirta ah. Cayayaankan kaliya waxaa laga heli karaa macruufka 7.1 iyo noocyadii hore ku fikirayay macruufka 7, maadaama Apple si dhakhso leh u xidhay qaladkan, joojiyay inuu la jaan qaado nooc kasta oo kale oo ka mid ah macruufka 7.1.x. Fiidiyowga hoose waxaad ku arki kartaa sida cayayaankaan yar u shaqeeyo.
Sida aad ku arki karto fiidiyowga, adigoo raacaya tallaabooyin taxane ah Waad tirtiri kartaa koontada 'iCloud' sidaas darteedna waad gab kartaa 'Raadi iPhone-kayga' shaqada, intaas oo dhanna iyada oo aan loo baahnayn in lagu galo erey sir ah.
Dabcan, si aadan u argagaxin waa inaad ogaataa in haddii aad ku dhejiso nambarka qufulka koontadaada suurta gal maaha in la joojiyo shaqadan.
Sidee cayayaankaan u shaqeeyaa:
Waxaan aadeynaa qaabeynta iCloud, oo aan ka dhex heli doonno arjiga Settings.
Waxaan isku dayeynaa inaan tirtirno xisaabta iCloud markii ay na weydiiso lambarka sirta ah waan dami doonnaa iDevice.
Waxaan u daarnay markale.
Waxaan fureynaa boosteejada (waa muhiim inuusan laheyn lambar sir ah).
Waxaan tagnaa menu-ka Settings, ka dibna waxaan geli doonaa goobaha iCloud.
Waxaan riixi doonaa tirtirto xisaabta iCloud.
Waxaan xaqiijin doonaa ka saarida goobaha iCloud.
Marka talaabooyinkan la qaado, waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo celiso qalabka iyada oo aan wax xaddidaad ah lahayn. Wax aad khatar u ah laakiin aan xasuusano kaliya waxay shaqeysaa marka qalabkaagu uusan laheyn sirta qufulka.
Sida loo furo iPhone-ka uu iCloud ku xiro macruufka 8
Ku soo noqoshada macruufka 8, khabiir xagga amniga ah ayaa cillad amni oo halis ah ka helay barnaamijka 'Mail mail', kaas oo kuu oggolaanaya inaad nadiifiso lambarka sirta ah ee 'iCloud'. Cayayaankaan waxaa laga heli karay macruufka 8.3 wuxuuna la jaan qaadayay dhamaan aaladaha isticmaalaya noocaas ah iOS. Sida uu sheegayo khabiirkan, Codsiga Boostada wuxuu leeyahay cilad noo ogolaaneysa inaan galino lambar HTML ah oo meel fog lagala soo dego emayl, iyadoo lagu darayo lambar qaab ah sumad taas oo si saxan u daaqad galitaanka daaqada iCloud, isku mid ah oo soo baxa marka Apple u baahan tahay inaan u aqoonsanno inaan nahay isticmaale sharci ah qalabka.
Nambarkan waxaa loo qorsheyn karaa sidaas orod marka aad toos u furayso emaylka si aad uga fogaato tuhun. Cayayaankaani ma soo qaado tuhuno maadama macruufka uu caado leeyahay mararka qaarna sabab la’aan si uu u codsado lambarkaaga sirta ah ee iCloud, sidaa darteed dadka isticmaala uma baahna inay ka fikiraan inaysan u dhigmin codsi dhab ah oo nidaamka ka imanaya. Sida kaliya ee lagu hubiyo inay tahay codsi isku dayaya inuu xado lambarkayaga sirta ah ama haddii ay dhab tahay waa inaad riixdo badhanka Guriga. Haddii codsigu run yahay, macruufka iOS nooma oggolaan doono inaan ka tagno shaashadda weydiineysa lambarka sirta ah.
Fiidiyowgaan waxaad ka arki kartaa sida uu cayayaankaasi u shaqeeyo ee kuu oggolaanaya inaad wax ka xado furayaasha furaha qalabka uu ku shaqeynayo macruufka 8.3.
Sida loo furo iPhone-ka uu iCloud ku xiro macruufka 9 / iOS 10 / iOS 11
Sida kaliya ee lagu furi karo aalad waa iyada oo la ogyahay lambarka sirta ah ee koontada uu terminalku la xiriiro. Waxaa jira habab kale oo noo oggolaanaya inaan furno boosteejada adoo adeegsanaya codsiyada. Gaar ahaan, waxaan ka hadlaynaa codsiga DoulCi, oo ah codsi bilaash ah oo loo heli karo labada Mac iyo Windows. The Software-kan wuxuu ku shaqeeyaa asagoo abuuraya adeege damiir la mid ah kan Apple Iyada oo ay gabi ahaanba ku khiyaanayso qalabka waxayna na siin doontaa lambar sir ah oo aan ku gali doonno galitaanka iCloud, taas oo sababi doonta in dhammaan waxyaabaha la tirtiro waana inaan ku darnaa aqoonsi cusub.
Qufulka iCloud malaga saari karaa JAILBILA?
In kasta oo qaar badani ay yihiin kuwa adeegsada JAILBREAK-ka si ay ugu rakibaan barnaamijyadooda burcad-badeedda ah saldhigyadooda, wax aynaan ka taageerin Actualidad iPhone, JAILBREAK ma aha oo kaliya inay u adeegto taas, laakiin adeegga ugu weyn ee adeegsadayaal badani waa inay qaabeeyaan qalabkooda iyagoo ku daraya shaqooyin in Apple aanu ku jirin. Iyadoo loo marayo xabsiga ma jiro qalab noo ogolaanaya inaan ka saarno qufulka iCloud hana furin xarunta haddii ay la xiriirto shirkad gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iCloud » Waxay ogaadaan hab lagu tirtiro koontada 'iCloud' oo aan lahayn lambarka sirta ah
Waxaa kaliya loogu talagalay iphone 4 oo leh iOS 7.1
berdad mio kaliya waxay la shaqeysaa iphone ios 7.1.2
Ku jawaab maximto
Da 'yar yar dijo
Ma nin caawimaad baaya inuu ka furo koontada daruurta?
Ku jawaab Junior Perez
ma u sameysay sida ku cad fiidiyaha?
Jooji, sidee baad u xiisaynaysaa
Waxaan xayiray iCloud
way ii shaqeyn weyday
Waad salaaman tihiin, halkan waxaan idinkaga tegayaa barnaamij hadii runti uu shaqeeyo lagu tijaabiyay iphone 5 16gb, waxaan iskaga tagayaa isku xidhka weyn ee 'mega link' si aad u soo degsataan, u kala fur furaan iyo voila oo moodooyinka oo dhami ay soo muuqan doonaan
Hadaad qalad kuhesho, iskuday in aad curyaamiso antivirus-ka, way ii shaqeysay aniga markii ugu horeysay, mahadsanid
Ku jawaab margaret
Curyaaminta antivirus ?? taasi waxay iila muuqataa sidan oo kale waa virus xD
Waad salaaman tahay, miyaad u malaynaysaa inuu xiriiriye hadda la heli karin, ma waxaad u malaynaysaa inaad u soo diri kartid is-cadaadis emaylkayga, fadlan?
Jose "Azabel Ripper" Lacag dijo
wax buufis ah oo aan curyaamin fayraska xitaa xitaa ma ordo mana siiso rukhsad maamule
Jawaab Jose "Azabel Ripper" Silver
Xaqiiqdii miyaad fulisay feyl sidan oo kale ah oo ma hawlgelisay difaacaaga kaliya sababta oo ah wax shisheeyaha kuu soo bandhigay oo aan xitaa garanaynin sida wanaagsan ee wax loo qoro? Adduunku waa xun yahay, miyaadan ogeyn inay noqon karto gadaal dambe (barnaamij si aad u hesho wadarta marin u helitaanka kombuyuutarkaaga adigoon ogayn) waxayna xadi kartaa dhammaan xogtaada xasaasiga ah xitaa waxay arki kartaa kamaradaada internetka? Hadana hadii aad kor ku dhahdo waxba ma bilaabanto maxaa yeelay asbaabo badan oo laga shakisan yahay, khayaanada noocan ah waxay ku socotaa asalka qaab "aan la arki karin" oo loogu talagalay isticmaalaha, qofkastoo socodsiiya waxaan kugula talinayaa inaad nadiifiso kombuyutarkaaga laakiin hada, waad awoodaa isticmaal qalabka kombuyuutarka ee loo yaqaan 'Comodo' scanner, Hitman's ama Dr. Web's.
Casabel Ripper dijo
Waa inaad kaxun tahay Margaret inay soo dirto ama siiso xiriiriye feyl aan shaqeynin, ugu yaraan waxaa jira dad badan oo aan xishood lahayn oo galiyay feylka waana inay xubin ka noqdaan wax yar oo lacag la siiyo ... wax bay weydiistaan ​​laakiin maalintaadu waqti ayey ku lumisay .. waad murugeysan tahay
Jawaab Azabel Ripper
Isku dayga habka ka muuqda youtube-ka ee leh ios 7.1.1 Waxaan isku dayay dhowr maalmood. Koontada lama tirtirin, laakiin maalin maalmaha ka mid ah r sim 9 pro ayaa i siiyay qalad waxaanan dib u bilaabay iphonekeyga. Markii aan daaray taleefanka, ma aanan haysan akoonkii hore, sidaas darteed waxaan qoray akoonkeyga icloud oo waxaan galay. Oo voalà!, Mar dambe ma aan haysan koontada kale ee icloud, markaa waan soo celin karaa iyada oo aan dagaal jirin 😀 Waxaan u aaday inaan raadinayo codkayga oo waxaan arkayay taleefankayga.
Daalacashada, waxaan helay barnaamijkan oo aniga ayuu iiga shaqeeyay iphone 5c ... halkanna waan ku arki doonaa haddii ay iyaduna adiga kuu shaqeyneyso
Waxaan ka hayaa iPhone 5s t mobilka waan iibsaday laakiin waxay leedahay akoon icloud ma galin lambarka sirta ah, nooca waa 7.1.2 Waxaan rabaa inaan ogaado haddii ay jirto wado looga saaro koontadaas iskuna dayay inuu dhunkado aniga oo daawanaya fiidiyowyada taas oo bixisa natiijooyin laakiin aan ku guuleysan tirtirka koontada hada wicitaanku ma sameyn karo wicitaano aniga i soo wac ... wax adeeg ah ma qabanayo wax siman gawaarida ah waan ogahay waxa aan sameeyo
waxaan nahay isla aniga oo wata iphone 4 = (
Waxaan hayaa 5c mana heli karo meel aan ku furo icloud, ma taqaanaa barnaamijka aan soo dejiyo?
barnaamijka waan u baahanahay, emailka waan ilaaway
Ku jawaab maicol
Ma jirto wado ay daqiiqadaha ku furi karaan icloud sidaas !! Xusuusnow lambarka sirta ah jejejejjejejej ama waxaad ka heli kartaa appel oo beddelaya lambarka sirta ah haddii ay sidaas tahay !! laakiin hadaad xadday way u duceeyeen adigu soo celi.
Jawaab israa'iil 4078
Waxaan hayaa Ipad 5-kayga maxaa yeelay koontada Icloud waxay ku jirtaa magaca qof kale, haddii qof iga caawiyo inuu ila soo xiriiro cinwaankayga emailka angelaranda@correodecuba.cu. deeqsi lahow qofka i caawiya.
Jawaab Angel Joaquin Aranda Terrero
Waa inaad soo celisaa iPhone, qaabeynta, guud iyo dib u dejinta. Nadiifi goobaha iyo waxyaabaha ku jira.
Mar dambe ayaad dib u bilaabeysaa oo waxaad ku geli kartaa koonto kale.
Ama waxaad aadeysaa Icloud.com oo aad codsaneysaa inaad soo ceshato lambarka sirta ah. Halkan.
Haddii midkoodna uusan shaqeynin, waxaad u geyn kartaa qeybiyaha Ipod-ka ee waddankaaga, halkaas oo ay ka soo ceshan karaan koontadaada, iyadoo ay suuragal tahay in macluumaadkaas la kaydiyo.
Xusuusnow inaad sameyso nuqul ka hor intaadan soo celin.
fiidiyowgaas waxaa si cad loogu arkay inay tahay adigoo riixaya isla waqtigaas «hel taleefankayga» iyo «ka saar koontada» kuwaas oo tallaabooyinka lagu furayo iphone ay khaldan yihiin
Ku jawaab Machado140795
Waxaan hayaa wado aamin ah oo aan kaaga saari karo icloud-kaaga qalabka IPhone-kaaga (laga bilaabo 4 ilaa 6 +)% 100 wax ku ool ah ... howshu waxay qaadataa 4 ilaa 5 maalmood si looga saaro. Wuxuu ku sameeyay iyada oo loo marayo Imei ee qalabkaaga. Wixii macluumaad dheeri ah emayl iigu soo dir fbwirelesstech2@gmail.com
Ku jawaab kelvin soto
Waad salaaman tihiin. Waan kaa caawin karaa inaad ka saarto dhawaaqa 30 daqiiqo. dabcan waxay leedahay PROS iyo CONS. ii qor http://www.facebook.com/thedevilinpersondie
Jawaab ku samee Moises Herrera Rodulfo
wuxuu ka shaqeeyaa macruufka 9.3.4
Ku jawaab carlos gomez
Maanta furid iPhone 6S ah
Ayaa doonaya inuu furo?
Ku jawaab YakusaWolf
Salaan !! Caawi My Apple Watch ma xirmo maxaa yeelay koontadii aan horey ugu lahaa iPhone 6 waan ilaaway oo waxaan iibiyay Cel laakiin iPhone-kan ma xiriiri karo maxaa yeelay waxay i weydiineysaa iCloud kii hore ee Cel-keyga kale laakiin ma xasuusto , kani Cel waa mid cusub oo waxaan sameeyay iCloud cusub, maxaan sameeyaa?
Ku jawaab alex alfredo
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa iPhone 4S oo leh akoon icloud ah oo iga caawin kara inaan tirtiro si aan ugu isticmaalo iPod ahaan, mahadsanid, haddii qof i caawin karo, kani waa IMEI IMEI 013047000926184, aad baad u mahadsan tahay
U jawaab Eliishaa
Teknolojiyada Merruk dijo
Halkan waxay ku saarayaan by IMEI
Jawaab Merruk Technolog
merruk technolog, xiriiriyahaagu waa qashin saafi ah.
Galab wacan qaali ah, waxaan xayiray dhawaaqa iPhone 4s, yaa garanaya sida looga saaro si wax looga beddelo?
Ku jawaab hernandez
Waxaan iibsaday gacan labaad
iphone 5s laakiin waxay i waydiinaysaa icloud qofka sababtoo ah waxay kicisay raadinta iphone-kayga tani waxay leedahay xal
Waa salaaman tahay !!!
Waxaan hayaa iPhone 6 qufulan, qofna ma ka ogyahay wax software ah oo lagu furo ICloud ama Iimey?
Waxaan haystaa iCloud qufulan iPad 2. Qof ayaa garanaya sida looga saaro.
Waxaad ubaahantahay xogta iCloud (username iyo password)
Luís, waan ogahay, dhibaatadu waxay tahay inay tahay gacan labaad… mana haysto xogta.
Waa inaad la xiriirtaa milkiilaha markaa, ma aqaan wax kale oo ikhtiyaar ah.
Waxaan haystaa ¡pad 2 mana xasuusto erayga sirta ah ee ¡daruuro, sidee baan u furi karaa plsss. Barako
Waxaan haystaa ipad 3 mana xasuusan karo furaha, sidee u furi karaa ama u tirtiri karaa?
Sida muuqata dhamaanteen dhibaato isku mid ah ayaan ka qabnaa ICloud, ma jirin qof tirtiri kara koontada bilaa lambarka sirta ah, marka qofkii garanaya sida loo sameeyo ayaa lala wadaagayaa kuwa aan sidoo kale u baahanahay. MAHADSANID!
Ku jawaab Angie
Catalina Waxaan hayaa iPhone 6
adeeggaagu muxuu ka kooban yahay ???
Ku jawaab francisco soliz
Qof kastaa wuu fahamsan yahay in IPhone-ka aadan ku ciyaareynin isla markaana aad ugu kalsoon tahay inaadan iibsan shay asal ahaan shaki ku jiro hahahahahahahaha
Maaha inay asal ahaan shaki kujiraan laakiin tani waa baloog aad weydiisato caawimaad
Jawaab Francisco M
hahaha, maxaa ceeb ah waxaan u maleynayay in kaliya aan haysto iPhone 5s xiran, laakiin waxaan u arkaa in aanan kali aheyn fadlan haddii qof ogyahay xalka in lala wadaago.
Waxaan hayaa iPhone 5s ay i iibiyeen waxayna leedahay akoon icloud ah, waxaanan rabaa inaan ogaado sida loo saaro iyo ninka ka dib markaan arkay laakiin waxba kamaanaan maqal isaga.
Ka waran aniga, waxaan hilmaamay lambarka sirta ah ee aiclon sideen u tirtiri karaa si aan mid kale u dhigo
Waxaan soo iibsaday iphone gacan labaad 5 ios 7.1.1 oo waxaan lahaa akoon icloud ah. Raadinta Youtube-ka waxaan ka helay fiidiyoow waxaan awooday inaan ka saaro koontadii hore oo aan dhigo mid aniga ii gaar ah. Weli ma hubo haddii cusbooneysiintu ay weydiisan doonto koontada milkiilaha hore
Haye muxuu yahay video-ga? : c
Ku jawaab sebastian rodriguez bogota
Waad salaaman tahay, waxaan iibsaday 3 iPad mini oo ah jiilka 3aad dadaal dheeraad ah sababta aan ugu baahanahay mid aan ku muujiyo laakiin halkaas waxay iigu reebeen mid ka mid ah 1500 iyo seddex x 2500. Waxay si fiican iigu adeegtay inaan gabi ahaanba kala furo oo aan iibiyo gabal kasta oo ka mid ah, baytariyada, taabashada, muujinta, badhannada, geesaha, guryaha, khadka tooska ah xitaa waxaan iibsaday mid ka mid ah saddexda cusub, waxaan u soo bandhigayaa qaybaha, kaliya waxaan ku kharash gareeyaa shaashadda casharro ku saabsan sida loo kala furfuro iyo voila, salaan,
Jawaab Javier mx
hahahahahahahahahaa, waa maxay video nacas ah, fiiri fiidiyowga oo xilligan aad ka tagto iphone-ka kumbuyuutarka PC-ga, duubista ayaa isbadalaysa, sidaa darteed fiidiyowga waa la jaray
Jawaab Jorge Reyes
Waxaan haystaa iPhone 5s horey loo soo celiyay waana inaan ka saaraa icloud. Iibinta iPhone-ka aniga way iiga iibin karaan lamana xiriiri karo ilmaha sidaa darteed wuxuu i siin karaa id tufaaxa si aan u helo codka. Ma jiraa qof barnaamij u leh inuu ka saaro dhawaaqa? fadlan.
Dhammaan dadka haysta iPhone-ka leh akoon waxay ila soo xiriiraan iPhones qaar ka mid ah waad heli kartaa iyaga sida kuwa kale, kama shaqeeyo bio bio-ka oo waxaan iibsanayaa iPhone iyo haddii iPhone-ka uu leeyahay menu oo mailkuna furan yahay waxaan heli karaa koontada Waxaan ka tagayaa nambarkayga oo isoo wac 990444745 gabi ahaan Chile
Ku jawaab joan pero
cidhiidhi ah dijo
Ka waran aniga waxaan heystaa iPhone 4s waxay ii calaamadeysaa icloud wax walbana waa la xiray laakiin aniga ayaa leh xiriir laakiin waxaan la imaadaa qadka wax walbana warbixin ma lahan ama wax meesha lagu qaban karo… ..
Ku jawaab pako
Subax wanagsan u samee iphone 4s leh tufaax id oo ku dhamaatay hotmsil.com taasi oo ah in aan qalad sameeyay markii aan qorayay hotmail.com badal kan s. Markii aan sameynayay cusbooneysiinta softiweerka, waxay i weydiisay id si aan u soo celiyo, laakiin maadaama aanan xusuusan erayga sirta ah ee id, waxaa loo xiray sababo ammaan. Markaad iskudayeyso inaad furto Aqoonsigaas, waxay u diraysaa nambarka amniga iimayl aan jirin mana awoodin inaan furo iphone-kayga. Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada.
Ku jawaab lucimarcastroparra
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, waxaan iibsaday gacan labaad iPhone 5s laakiin koontada iCloud ee milkiilaha hore ayaa loo daayay, qof ayaa garanaya haddii uu jiro xal fadlan waxaan u baahanahay caawimaad. Wax kasta waa lala xiriiri karaa emailkayga s.jmg@hotmail.com ama igu soo qor whatsapp +573195107267
sidoo kale iphonekeyga waxaa xirey icloud waxna haba yaraatee maheli karo inaan furo, fadlan ma i caawin kartaa
Waa inaad abuurtaa emaylkaas aan jirin, ama haddii uu jiro, waa inaad jabsataa emaylkaas oo aad aragtaa lambarka.
Ku jawaab Mencos
Dhibaato ayaa i haysa waxaan haystaa iPhone 5 c iyo icloud waxaanan dhigayaa e-maylkeyga iyo ereygayga sirta ah mana ii oggolaan doono inaan wax ka soo dejiyo waxna ii soo diri maayo farriin lambar si aan u soo degsado arjiga si aan u arko haddii aad caawin aniga
Salaan !! Qof ayaa noo soo gudbinaya xogta haddii ay ka furan karaan iphone-kooda shaashadda si uu ula wadaago: (ama wixii ay ku sameeyeen dhammaadkii iyaga) Waxaan arkayaa qoraallo duug ah oo aad u da 'weyn
Jawaab ku bixi Diana
Waan ka xumahay, khadadka aad gudbisay wuxuu leeyahay sidan: «SHURUUD GAAR AH: IN AQALKAAGU MUUJIYO SHAQO SIDAN AH:
* Qufulka iCloud waa inuu ku jiraa lambarka taleefanka, sida ku cad sawirka.
Laakiin taleefankayga iPhone 4s lambarka taleefanku ma muuqdo, wuxuu u muuqdaa sidii sawirkii ugu horreeyay, ma wuxuu u adeegaa si isku mid ah si looga saaro koontada icloud?
Waad salaaman tihiin, waxaan u baahanahay qof dhab ah oo yaqaana sida shaqada loo qabto runtii si wanaagsan.waxaan hayaa shaqooyin aan qabto .. emailkeyga ayaan uga taga guillermofarias38@gmail.com Whatsapp 351-6180194
Qaali majirto waddo la yaqaan, jooji khiyaanooyinka dadka, fadlan ha siinin faahfaahinta xiriirkaaga mushaarka, bogga waa kalluun !!!!
Waxaan hayaa iphone 5s waxaanan runtii rabaa inaan isticmaalo, kaliya icloud ayaa iga hor tagta :(
Caawinaad +52 044 656 312 8789
Jawaab Johcsan Torres
Aniga ahaan, kuwa codsada macluumaadkan waa si fudud maxaa yeelay waxay iibsadeen qalab la xaday waana taas sababta ay xaaladaas ugu jiraan. Soo iibso qalab sharci ah oo aan la xadin !!!
hahaha, waxay i siisaa qosol yar waxa ay ku dhahdo dhamaadka in aysan jirin qaab lagu tirtiro daruuraha, dabcan way jiraan, laakiin sida iska cad ma dhigeyso sida loo qabtay, sax? Waxaan haystaa in kabadan 20 kombuyuutar oo udhaxeeya iphone iyo ipad waxaanan kuu sheegi karaa hadaad awoodo, kaliya inbadan aysan aqoon sida loo sameeyo, hadii ay qaali tahay, waan aqoonsanahay, waana sababta loogula talinayo qalabka leh sicirka qiimaha sare ee suuqa Haga, sii deynta icloud ayaa kugu kici doonta kugu dhowaad 2500 peso Mexico.
Ku jawaab Alfonso Zarate
Alfonzo ma haysaa wax bog ah oo aad igula talineyso inaad bixiso si aad u furto iphonekeyga taas oo hubaal ah inaysan i khiyaanayn doonin
Ku jawaab kanos
Waa maxay codsiyada aan u baahanahay inaan furo iPhone 8plus? I caawi
Ku jawaab david cruz
Tirtirida ICLOUD waxay ku jiri kartaa dariiqooyin fara badan oo khiyaanooyin ah kuwa ugu badan laakiin si shaqeysi ah, KELIYA waxaad xiriir wanaagsan la leedahay taleefanka ... AMA TELEFOONKA MX HAHAHA WAANA SAMEEYAY, HADDII AAD OGAAN KARI KARTO? MID LAGA HELO DATABASE EE DUELKA ASALKA AH OO UU WACO TOLO SI toos ah U SHEEGAYA QAYBTA AY KA RABAAN QALABKA AY LEEYIHIIN, HAYNTA MACLUUMAADKA Mulkiilaha ASALKA AH, SU'AALAHA AMNIGA EE QALABKA WAA LAGA JAWAABAY WAANA LA HUBAY, LAGU IIBSADAY QAYBTA QALABKA IYO CODSIGA AAD KU DIRTO TAAGEERADA IYO INTA KALIYA OO KALIYA KHIYAAMO WANAGSAN. GERAGP2011@HOTMAIL.COM
Jawaab GERARDO GARCIA PAEZ
Waxaan hayaa iphone 6s, sideen uga saari karaa koontada icloud?
Jawaab ku sameeyeny@gmail.com
heck. taleefankayga waxaa iska lahaa sodohday sodohdeedna waxay u samaysay ciwaan cusub taleefoonkeeda cusub oo taydu ma xasuusto furaha sirta ah ama wax kale ... sidee baan ku samayn karaa si aan u dhigo xisaabtayda codka leh
Weli waxaan hayaa iphone 6s leh icloud waxay ii sheegaan inaad ku boodi karto r sim waa run
Saaxibayaal subax wanaagsan halkan hagaajinta dekedda waxaan si deg deg ah oo aan dhib lahayn ugu fureynaa qalabkaaga icloud-ka xaafadda ama khadka tooska ah, marka lagu daro, QALABKA FARSAMO EE SHAHAADAYSAN Qalab gaar ah oo shaqsi ahaaneed oo loogu talagalay furitaanka, sii deynta iyo hagaajinta qalabka waxaad nagala soo xiriiri kartaa whatsapp +52 2292225800
Haddii aad ka timid Veracruz, la xiriir Francisco Canal 962 inta u dhaxeysa Hidalgo iyo Independencia Colonia Centro
Sida loo furo iphone 5s iOS 11 waa gacan labaad qofka lehna ma garanayo cida tahay sida loo furo si loo isticmaalo. Waxay i weydiistaan ​​iimeyl ka imanaya jelly__@www.l*****.cl mana ogi waxa uu yahay emaylku ama cidda CAAWINaysa !!!!.
Ku jawaab taeyang
Ma iga caawin kartaa in aan furo ihpone 5 waxaa ku jira icloud
WAXAAN LEEYAHAY WADA JOOGTA AAN KA SOO BAXAYO ICLOUD, OO Udhaxeysa 30 iyo 40 DOLLAR OO KU XEERAN MAYA MAYA
-Waxaan KALOO KA SAXAYNAA EFI MAC
Ku jawaab ramon
Waxaan hayaa Iphone 6s Plus waxaana xannibay icloud, fadlan i caawi, wax u qor osniel86@nauta.cusalaan ka timid Cuba
Waad salaaman tihiin habeen wanagsan, waxaan idinla socodsiinayaa in aan furo iCloud iPhone 6 ama 6s oo lagu daray waxaan ku noolahay dalka Argentina dir lambaradiina, kuwa xiisaynaya, qaabkani waa ka ugu raqiisan maxaa yeelay waxaan hayaa dhamaan aaladaha hadaad u baahan tihiin inaad furtaan nooc kale oo iPhone ah, waan diyaarin karaa qalabka lagama maarmaanka ah oo fur.
Waad salaaman tahay, waxaan ubaahanahay inaan furo asalka asalka ah ee iPhone 6 iyo sidoo kale, fadlan caawi, waxaan ku iibsaday gacan labaad iyo markaan dib uga soo celiyo warshadda, iCloud qofkii hore ayaa soo muuqday, waxaana soo marsiiyay Messenger iyo wasap waan sheekaysanayay laakiin markii aan ahaa anigoo sifiican usameynaya waan tirtiray lamana aanan xiriiri karin.
Ku jawaab Roxe
Waxaan ka imid Argentina
Si aad u furto iPhone 6s oo lagu daray. Sidee loo sameeyaa?
Waad salaaman tihiin, galab wanaagsan, waxaan haystaa 6gb iphone 128s, waxay si firfircoon u shaqeysay. Waxaan weydiisanayaa dhamaan dadka xog ogaalka ah ee yaqaana sida loo sameeyo Kuwaani waa kuwa ila xiriira. Nve2251 @ gmail. Com
Dhanaan_usher @ hotmail. Com
Ku jawaab Melchor
hello waxaan hayaa iphone 6s oo lagu xiray icloud yaa iga caawin kara nambarkeyga 0039 328 0722160 mail: gato.cuba73@gmail.com
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa iPhone 6s oo lagu xiray akoon icloud, waxaan ku qaadanayaa ituns, laakiin iima oggolaan doonto inaan cusbooneysiiyo, iga caawi inaan furo xfa 9982319697
Ku jawaab marcus
Waad salaaman tahay saaxiib, waxaa ii soo baxday inaan ka helay 6s dukaan intii aan wax ka iibsanayay, in ka badan bil ka hor milkiilahana uusan wicin, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay jirto wado aan kula xiriiro
hello good waxaan hayaa iphone 7 iyo 6s oo aan ku furayo icloud sideen u nahay ... yaa i caawiya
Waxaan rabaa inaan ogaado sida aan uga saari karo akoonka icloud ka iphone 6s. Mahadsanid
Guul Hugo dijo
hello anonimouys; waxaan hayaa iphone 6 (16gs) qufulka icloud waxaan kusoo celiyey ios1.4.1 mana jirto wado lagu furo waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa aad u baahantahay inaad aragto hadii aad furi karto ...
dheh atte victorio2006@gmail.com kani waa emaylkeyga shaqsiyeed ..
Waxaan ka imid Bariloche ………
Jawaab si victor hugo
waxaan rabaa caawimaad, si aan u furo iphone
Jawaab Alfredo MOran Lem
Saaxiib Wacan Waxaan Ubaahanahay Caawintaada Waxaan U Badalayaa Taleefoonkeyga Taleefanka Iphone 6s Waqtiga Bedelaada Ha Baadhin Hadaan Ahayn Ilaa Aan Gaadho Gurigeyga Taleefankana Wershad Dib U Dib U Weydii Oo Weydiiso Xisaabta Icloud Ee Aanan Aqaanin Igu Tali Inaan Horay Telefoonkeyga U Waayay Mise Xal Ayaa Jira
Jawaab Leonardo Bautista
Dayactirka mobaylka waxay iga caawiyeen sii deynta iyo furitaanka iphone 7 oo aan kujiray liiska madow oo aan kulahaa icloud laakiin waxaan uqaatay halkaas ayey fureen waana sii daayay waxaan uga tagay lambarkooda whatsapp 2292225800, waxaan kugula talinayaa inaad halkaas ka hubiso ama meelkasta shaqsi ahaan waan kula dardaarmayaa iyaga maxaa yeelay waa goob jir ahaaneed, waxaan isku dayay bogag badan oo fb ah weyna i khiyaaneeyeen in ka badan hal jeer, salaan wacan
Qashinka nadiifka ah, qaado talaabooyin aad horey ugu raaci karto nidaamka. Sida $% / &% waxaan sameyneynaa taas haddii ay si sax ah u tahay waxa aanan sameyn karin.
Ayeeyaday waxay ii soo dirtay iphone-keeda, waa xr laakiin waxwalba way ilaawday, ma xasuusato emaylka ama lambarka sirta ah, sidee baan ku furi karaa, iskuday dhamaan dariiqooyinka waxna ma caawiyaan fadlan
Ku jawaab yanel
WhatsApp ayaa soo saarta laabta hal bilyan oo isticmaale maalin kasta
Apple waxay ka saareysaa iPod Nano iyo iPod Shuffle dukaamada internetka